Inonakidza seSychelles Rekodhi Vanopfuura zviuru zana zveVashanyi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » Inonakidza seSychelles Rekodhi Vanopfuura zviuru zana zveVashanyi
nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Seychelles inogamuchira vafambi vanobva kuIsrael
Vafambi vaifamba kubva kuIsrael vakaburuka kumitambo inofadza yemadhiramu emuno uye nekuona vatambi vechivanhu musi weSvondo, Gunyana 19, 2021, masikati senzvimbo yekuenda kuSychelles inonyora pamusoro pevashanyi zviuru zana pazuva rino.
Kuburutsa vatakuri kubva kuEl Al ndege LY055 kubva kuTel Aviv vakarapwa kuravira kwekugamuchira vaeni kweCreole pachitsuwa ichi.
Ichi chiitiko chakakosha chakakosha kunzvimbo yekuenda sezvo huwandu hunoratidza kuti kuedza kwakasimwa nehurumende nevadikani kuri kubereka michero.
Seychelles yaive imwe yenzvimbo dzekutanga kuvhura kushanyi zvisinei nehutachiona hwevashanyi.
Sechikamu chekugamuchirwa kwakakosha kupemberera chiitiko chakakosha ichi cha2021, kuburutsa vafambi kubva kuEl Al ndege LY055 kubva kuTel Aviv vakaitirwa kuravira kwekugamuchira vaeni kweCreole pachitsuwa ichi, pamwe nekugamuchira chiratidzo chekutenda kubva kuDhipatimendi reKushanya renyika.
Vachitaura kubva kuSeychelles International Airport yePointe Larue, Mai Bernadette Willemin, Director General weKushanya Kwekushambadzira, vakati chiitiko chakakosha ichi chakakosha pakuenda sezvo huwandu hunoratidza kuti kuedza kwakasimwa nehurumende nevadikani kuri kubereka michero.
“Nhasi uno ndipo panotangira chitsauko chakakosha mukumutsiridza indasitiri yedu yezvekushanya. Secheres iri munzira chaiyo yekusangana nezvakafanotaurwa zvakaitwa neDhipatimendi Rezvekushanya muna Ndira 2021. Kunyora pamusoro pevashanyi zviuru zana mukupera kwesvondo kunotivimbisa mune basa rakanaka rinoitwa nevamwe vese kubatsira kupora. Ndinorumbidza kushinga kwevatinoshanda navo mumaindasitiri nemamwe masangano akabatsira mukubudirira kwezuva rino, ”vakadaro Mai Willemin.
Imwe yenzvimbo dzekutanga kuvhura zvekushanya zvisinei nehutachiona hwevashanyi mushure memushandirapamwe wakasimba wekudzivirira nyika yevagari vayo nevagari, kudzidziswa kwevashandi veindasitiri yezvekushanya muzvirongwa zvehutano nekuchengetedza, uye zano rayo rekuvhura kumamwe masosi enzvimbo, vanosvika ku iyo Seychelles zvinotarisirwa kuramba zvichikwira.
Kudzoka kwezvikepe zvidiki zvekutenderera muna Gumiguru uye kutandara kwematanho kutenderera pasirese, kwete zvishoma mumisika yayo yechinyakare muWestern Europe, zvinotarisirwa kusimudzira vanosvika vekushanya zvakanyanya.
Iwo anotungamira misika mitanhatu muna 6, zvichienderana nedata rakapihwa neNational Bureau ye Statistics, inosanganisira Russia, United Arab Emirates (UAE), Israel, Germany, France, neSaudi Arabia.
Parizvino, nzvimbo yekuenda iri kupihwa nendege dzekutengesa gumi dzinosanganisira Air Seychelles, ndege yayo yenyika, iyo ichange ichitangazve kuenda kuSouth Africa kubva munaGunyana 10, 26.